USETYENZISWA NJANI ISIQINISEKISO KANYE SENZELWA NTONI?
Xa uthetha ngokuthambekela kunye needigri kubalulekile ukuba wazi Usebenzisa njani iprosesa. Isixhobo sokulinganisa esisetyenziselwa ukulinganisa ii-angles zemigca emibini okanye unxantathu; Namhlanje sikuzisa yonke into enxulumene nesixhobo sokulinganisa esinomdla esisetyenziswa kwiindawo ezininzi.
1 Isetyenziswa njani i-protractor?
1.1 Imvelaphi kunye nembali
1.2 Inkqubo yokusetyenziswa
1.3 Ukwahlula isangqa
Isetyenziswa njani i-protractor?
Ukwazi Usebenzisa njani iprosesa kubalulekile kuqala kuqala ukwazi ukuba siyintoni na esi sixhobo. Kuboniswa ukulinganisa ii-angles ngeedigri; Iza ngeendlela ezahlukeneyo, ngoko ke inokuba sisetyhula okanye isetyhula ngokulula, apho eyokuqala inamanani ukuya kuthi ga kwiidigri ezili-180 kwaye okwesibini ukuya kuma-360 degrees.
Ngenxa yoko, isixhobo siyilelwe ngothotho lwemibhalo ebekwe ecaleni kwesangqa okanye isangqa, apho iidigri zichaziwe. Iimpawu zahlukile, isidanga ngasinye sincinci kwaye siyacaciswa kuthathelwa ingqalelo ukwahluka kwe-angular kunye nexabiso lesidanga esisekwe kwisityalo, le nkqubo ibizwa ngokuba yi-sexagesimal.
Iiprosesa ezijikelezayo zivela kumndilili we-180 degrees sexagesimal apho imilinganiselo ibonwa khona ukusuka ekunene ukuya ekhohlo okanye ngokuchaseneyo ukuqala kwinani. amanyathelo afanelekileyo; Emva kwexesha siza kubonisa ngokweenkcukacha ezinye iingcebiso kunye namacebo okusetyenziswa kwayo.
Esi sixhobo sayilwa ngamaBhabheli, abanye bathi yayingama-Egypt. Ngaphandle kolwakhiwo olukhulu olwalusenziwa ngela xesha zombini ezi zikumkani, babenomthuthi njengesixhobo sokulinganisa kunye nezikwere. Ngexesha le-Greek domain domain, uhlobo lokulinganisa ngee-angles lwasekwa kuthathelwa ingqalelo iidigri, ngemizuzu kunye nemizuzwana.
Kwinkulungwane yesibini, iinkqubo zohlobo lwe-trigonometric zaqala ukusetyenziswa. Izazi ngeenkwenkwezi zamaGrike ziqwalasele imilinganiselo ngetafile, enedatha ye-trigonometric apho enye yezibalo ebizwa ngokuba yiHipparchus, ibizwa ngokuba ngumthuthi; Ngale tafile ingcali yemathematika ingasombulula iingxaki ezintsonkothileyo ze-trigonometric kwaye isombulule ukungafani kunye neenqobo zokuziphatha ezinxulumene noonxantathu.
Le protractor yokuqala yaqala kwi-angle ye-degrees ezingama-71 yenyuka yaya kutsho kuma-180 degrees. Itheyibhile ivumela ukunika ubude kwi-chord edibanisa amacala e-engile esembindini, kusetyenziswa irediyasi yomjikelezo. Nangona kunjalo, kwiminyaka engama-300 kamva isazi ngeenkwenkwezi ogama linguPtolemy wasebenzisa umlinganiso ngerediyasi engama-60 degrees, apho amaGrike ayesamkele isiseko se-hexadecimal system.
Esi sazi ngeenkwenkwezi sifake itafile ebizwa ngokuba yiAlmagest, eyayinothotho lweentambo ezifanayo nemilinganiselo yangoku yomthuthi: ngazo wayenokwenza izibalo eziphakathi kwe-1 ne-180 degrees; Indlela esetyenziswe ngeentambo ukwenza imilinganiselo eyahlukeneyo. Ukusukela ngeloxesha ukuza kuthi ga kulo mhla, le sayithi yeenkwenkwezi ikholelwa ukuba ingoyena mvelisi womthuthi njengoko siyazi namhlanje.
Emva kwexesha baqala ukwenziwa ngomthi kunye nokufika kwenkqubela phambili yabantu, benziwa ngezinto zeplastiki, kunye nesinyithi; Kule mihla bayimfuneko kakhulu kulwakhiwo, uyilo lobunjineli, oomatshini kunye nemathematics. Apho imisebenzi yemilinganiselo iphunyezwa kuthathelwa ingqalelo ukusetyenziswa kwayo.
Okokuqala kufuneka sichonge Uyisebenzisa kanjani iprosesa yokulinganisa ii-angles, yazi ukuba isetyhula okanye isemicircular. Kuzo zombini iimeko esi sixhobo simisela imilinganiselo kwiidigri, ke xa usisebenzisa ezinye iinkalo kufuneka ziqwalaselwe, masibone:
Emva koko, ukuba sifuna ukulinganisa i-engile, kufuneka sibeke i-protractor ekhangela i-vertex yemigca emibini ethambekileyo, kwindawo yokudibana kufuneka kubekwe indawo esembindini yesixhobo; Kwiimeko ezininzi iprosesa enesalathiso, abanye banomngxunya omncinci kwaye abanye luhlobo nje lwesangqa esinemigca.
Emva kokubeka i-protractor kwindawo yokudibana yomibini imigca, siyaqhubeka ukulinganisa ukuya kuthi xhaxhe ngomnye umgca apho sixhobo singena khona; Kuya kufuneka sitshatise lo mgca kunye nexabiso leprosesa. Ukuba silinganisela ukusuka ekhohlo ukuya ekunene siqala ukuthatha i-zero ebonakala kwicala lasekunene, ukusuka apho siqala ukungqinisisa de sifike kwindawo apho kungqamene khona umgca kunye neprosesa.
Ukuba ungayibona imilinganiselo yesixhobo, kuyabonakala ukuba inendawo esembindini ebonisa i-90 degrees, ukusuka apho uye ekhohlo okanye ekunene okanye kuxhomekeke ekubeni umlinganiso wenziwa phi na, ireferensi kufuneka ithathwe ukunyusa okanye ukunciphisa iidigri. . Inkqubo iyasebenza ngakumbi kunethiyori, kwaye nasemva kokuba isetyenzisiwe okokuqala iba yinkqubo yesiqhelo.
Ukuba sifuna ukucacisa amanani ejometri kuthathelwa ingqalelo isazinge, kubalulekile ukwazi ukuba kwimeko yeenkwenkwezi rhoqo kunye neenkwenkwezi, i-engile nganye kufuneka ifane kwicala ngalinye. Emva koko kuya kufuneka siyazi ukuba siyisebenzisa njani iprosesa ye-360 degree. Ngokukhawuleza umjikelo uzotywe uthatha indawo ekubhekiswa kuyo kwisangqa.
Emva koko sizobe umgca othe tyaba kuloo ndawo ichaphazela imiphetho yesazinge. Ukuba sizahlulahlula isangqa sibe ngamacandelo ama-5 alinganayo, senza isahlulo, apho sithatha khona ixabiso elipheleleyo lesazinge esikwi-360 degrees saza sahlulahlula ngo-5, isiphumo ngama-72 degrees.
Sithatha iprosesa kwaye siyibeke embindini wesangqa, kwaye ukusuka apho siqala ukulinganisa iidigri ezingama-72 ukusuka ekhohlo ukuya ekunene okanye ngokuchaseneyo, simakisha ngepensile indawo yeedigri kwaye loo ndawo ithathwa njengesalathiso sokulinganisa enye i-72 izidanga, ngale ndlela siyancedisana ngokulandelelana ukufumana amanqaku ama-5 kwisangqa ekufuneka silingane.
Okokugqibela, sicebisa ukuba singazisebenzisi ezi zixhobo ukwenza umkhondo; isixhobo ngasinye sokuzoba okanye sejiyometri kufuneka sisetyenziselwe into eyilelweyo. Ezinye zezi zixhobo zibiza kakhulu kwaye xa zisetyenziselwa ezinye izinto zinokufumana ukonakala; khumbula ukuba kule ndawo kubalulekile ukwazi ukuba zeziphi izixhobo zokulinganisa kunye nokulandelela.
Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngezi zihloko, siyakumema ukuba undwendwele lo myalezo ulandelayo Iiyunithi zomlinganiso: Zintoni ezo? Zisetyenziswa phi? apho kuboniswa imixholo enomdla.